Sarotra vao mahita asa : zara raha mahay mamaky teny sy manoratra ny 70%-n’ny tanora | NewsMada
Sarotra vao mahita asa : zara raha mahay mamaky teny sy manoratra ny 70%-n’ny tanora
Nisongadina omaly nandritra ny fampahafantarana ny boky torolalana ho an’ny tanora sy ny mpampiasa, fa zara raha mahay mamaky teny sy manoratra ny 70%-n’ny tanora tonga eo amin’ny sehatry ny asa. Miteraka olana eo amin’ny sehatry ny asa izany satria mitaky diplaoma avokoa ny ankamaroan’ny orinasa.
Mitaky fampiofanana betsaka ny tanora io salanisa ambany eo amin’ny tsy fahaizan-taratasy io raha ny filazan’ny avy ao amin’ny BIT, Ntsay Christian. Rehefa votsa an-taratasy, tokony ho kinga amin’ny fahaizana asa tanana.
Takin’ny mpampiasa ny diplaoma bakalorea, raha kely indrindra ho an’ireo sokajin’asa toy ny mpamafa trano sy mpiambina tanàna. Ankoatra izany ny fifehezana tenim-pirenena vahiny. Efa manaraka ny teknolojia avo lenta avokoa na fitaovana ampiasain’izy ireny ka tokony ho hay ihany koa ny mamaky ny torolalana amin’ny fampiasana izany fitaovana izany ka izany no antony hitakiana diplaoma.
Nilaza ny minisitry ny Fampananan’asa sy ny asa ary ny fampiofanana teknika, Raharimalala Toto Lidya, fa maherin’ny 5 hetsy isan-taona ny tanora tonga eo amin’ny sehatry ny asa. Manao asa tsizarizary avokoa anefa ny 79%-n’izy ireny noho io antony tsy fahaizan-taratasy io. Eo koa anefa ny tsy fahampian’ny tolotr’asa ho an’ireo nahavita fianarana.
Raha ny salanisa navoakan’ny Instat, voatery miandry roa taona ny tanora vao mahita asa aorian’ny taona tokony hiasany ka mahatonga fatiantoka eo amin’ilay tanora sy ny fiarahamonina misy azy izany.
Natao hanampy ny tanora amin’ny karazan’asa misy sy ireo orinasa misy ny boky torolalana nampahafantarina omaly izay haparitaka manerana ny Nosy.